Kiev Şehir İdaresi Troeyşçına Metrosu Hakkında Bilgi Verdi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ38 ယူကရိန်းKyiv City Administration သည် Trajshchev Metro ကိုအကြောင်းကြားသည်
11 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 ယူကရိန်း, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro 0
kiev မြို့အုပ်ချုပ်ရေး troeyscina မက်ထရိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်
Trotschynia သို့မြေအောက်ရထားကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပါကနှစ်များ 5-7-10 ကြားတွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ကိယက်ဗ်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်အကြီးအကဲနီကိုလိုင်ပိုဗရော့ဗ်နစ်nikမိုးမျှော်တိုက်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ဤနည်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
“ တရုတ်လူမျိုးတွေကဆင်ခြေဖုံး Trojshchina (Троofщина) မက်ထရိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ချေးငွေထုတ်ချေးဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ပဏာမခန့်မှန်းချက်အရ2ဘီလျံဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းပြောနေတယ်။ သို့သော်တရုတ်အနေဖြင့်ဤချေးငွေအတွက်အစိုးရအာမခံချက်များကိုလက်ခံရန်လိုအပ်သော်လည်းအစိုးရက၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးရန်ငြင်းဆန်သည်။
သူကမက်ထရိုသည်တာရှုရှမြို့သားများသာမက Solomenka နေထိုင်သူများအတွက်လည်းလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ မက်ထရိုဘူတာလည်းမရှိဘူး။ အနီးဆုံးမီထရိုဘူတာကတော့မနက်ပိုင်းမှာလူစည်ကားနေပြီးခွေတွေရှည်နေတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့် Julyani ကနေ Trajshchina အထိ metro လိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းပြaccessနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။ ”
Nikolai Parovoznik ၏အဆိုအရ Trotschynia 5-7-10 သို့မြေအောက်ရထားလမ်းကိုနှစ်များအတွင်းတည်ဆောက်နိုင်သည်။ Iye ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့တွင်ပဏာမဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတစ်ခု (ဤဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက်၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်း) တစ်ခုသာရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပြည့်အဝဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက်နှင့်မြေအောက်ရထားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းမရှိသေးပါ။
ကိယက်ဗ်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေး၏ဒုတိယဥက္ကthey္ဌကပြောကြားရာတွင်ယခုတွင်သူတို့သည်“ မီးရထားလမ်းကြောင်းကို Trajshchina သို့ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြေဖုံးရထား၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၊ Trajshcine ရထား။ ဤလိုင်းအားလုံးကိုဆက်သွယ်ရန်သာလိုအပ်သည်။
“ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံအဆောက်အ ဦ ၀ န်ကြီးဌာနကိုမီးရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပြေးဆွဲမည့်ကိယက်ဗ်အတွက်လမ်းရထားလမ်းစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအဆိုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ ဤစီမံကိန်းသည်မည်သည့်အစိုးရအာမခံချက်မှမလိုအပ်ပါ။ EBRD သည်ယူရိုသန်း (500) သန်းတန်ဖိုးရန်ပုံငွေများကိုခွဲဝေချထားပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, Ukrzaliznytsia ဤစီမံကိန်းအပေါ်ငါတို့နှင့်အတူသဘောမတူဘူး; ကုန်တင်ရထားတွေကသူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုပြောင်းရတယ်၊ သူတို့အတွက်အကျိုးမရှိပုံရတယ်” ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ (Ukrhab ဖြစ်ပါသည်)
Melih သမ္မတ, တူရကီအတွက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အတွက်လုပ်ရမည်အကြောင်းကို TOBB စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် Verdi ကေဘယ်လ်ကား။ 15 / 02 / 2012 မြို့တော်ဝန်Gökçekက 250 သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူဖိုဘတ်စ်ကားအသစ်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပါပြီ၊ နွေရာသီတွင်တင်ပို့မှုများစတင်မည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ၍၊ otobüsမှ 200 ဖိုဖိုများ ၀ ယ်မည်
Recep Altepe Channel ကိုပု Silkworm လမ်းရထားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏704 / 12 / 2011 အဆိုပါလမ်းရထားပေါ်တွင် Silkworm:77 Channel ကိုနံနက်ယံ၌ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, တူရကီတင်သွင်းဖို့ 50 ဒေါ်လာဘီလျံကယ်တင်မည်သူပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလမ်းရထားစီမံကိန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ 04 ဒီဇင်ဘာ 2011 …
လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း Verdi ပြန်ကြားရေးကြားမှာ TCDD Erzurum Erzurum ဘူတာ Manager ကိုကြောက်မက်ဘွယ်-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား 30 / 03 / 2012 နိုင်ငံပိုင်မီးရထားများဖြစ်သော Erzurum ဘူတာမှဒါရိုက်တာ Ahmet Basar၊ AA သတင်းထောက် Basar မှပြောကြားရာတွင် 2012 နွေရာသီသည်အရေးကြီးသောအလုပ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
AK ပါတီ Bursa လက်ထောက် Ozturk, Bursa ရဲ့ Key ကိုကိစ္စများတစ်ဦးနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏ 25 / 05 / 2012 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ် မြေအောက်ရထားနှင့်လမ်းရထားကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအပြင်အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်လမ်းများဖွင့်လှစ်သင့်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Bursa ကိုလျှော့ချသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထဝီအနေအထားနှင့်လှပမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ Bursa အစားအစာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး…
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Marmaray ၏အဆုံးနေ့စွဲအကြောင်းန်ကြီးYıldırım Verdi သတင်းအချက်အလက် 21 / 06 / 2012 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, တူရကီရဲ့အဓိကမြို့ကြီးများသူတို့ကတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့် Marmaray အဆုံးနေ့စွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, တူရကီရဲ့ ...
Melih သမ္မတ, တူရကီအတွက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အတွက်လုပ်ရမည်အကြောင်းကို TOBB စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် Verdi ကေဘယ်လ်ကား။
Recep Altepe Channel ကိုပု Silkworm လမ်းရထားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏ 7
AK ပါတီ Bursa လက်ထောက် Ozturk, Bursa ရဲ့ Key ကိုကိစ္စများတစ်ဦးနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Marmaray ၏အဆုံးနေ့စွဲအကြောင်းန်ကြီးYıldırım Verdi သတင်းအချက်အလက်
တူရကီ Metrobus လိုင်းအကြောင်း MAG နိုင်ငံတော်သမ္မတ Verdi သတင်းအချက်အလက်
Izmir Metro ရထားလမ်းစနစ်၏ Kocaoglu နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့တယ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe Bursan ရထားလမ်းစနစ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့တယ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းရာတွင်အဆင်ပြေမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းခဲ့သည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mehmet လီÇalkaya Urla cable ကိုကားတစ်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏